घर मा एक ग्रीनहाउस स्थापना र जाडो को सबैभन्दा बनाउन | बेजिया
मारिया vazquez | 13/09/2021 20:00 | सजावट
के तपाईं चाहानुहुन्छ? एउटा सानो बगैचा छ? बीउ बाट तपाइँको आफ्नै खाना बढ्न सक्षम हुनुहुन्छ? अझै जाडो मा बागवानी को आनन्द लिइरहनुभएको छ? घर मा एक हरितगृह समाधान छ जाडोमा तीव्र चिसो, वर्षा वा हिउँ बाट तपाइँको सबैभन्दा नाजुक बिरुवाहरु र फूलहरु लाई बचाउन।
अब त्यो जाडो आउँदैछ घरमा ग्रीनहाउस स्थापना गर्नुहोस्! यसले तपाइँलाई बागवानी र बागवानी को आनन्द लिन जारी राख्न को लागी बर्ष को यस समय मा अनुमति दिनेछ, साथ साथै तपाइँ एक आराम गर्ने ठाउँ संग प्रदान गरीरहेको छ। यस्तो गिलास ग्रीनहाउसहरु को रूप मा अधिक आकर्षक र टिकाऊ संस्करणहरु मा शर्त वा सस्तो सामाग्री संग तपाइँको आफ्नै ग्रीनहाउस बनाउन।
1 घरमा हरितगृह हुनुको फाइदा
2 हरितगृहहरूको प्रकार
2.1 गिलास को
2.3 आकार मा सानो
घरमा हरितगृह हुनुको फाइदा
त्यहाँ घरमा हरितगृह स्थापना गर्ने धेरै फाइदाहरु छन्, तर चिसो ठाउँ जहाँ हामी बस्छौं। हामीलाई एसजाडो मा हाम्रो बगैंचा मा वा हाम्रो बिरुवाहरु संग काम जारी छ, चिसो बाट यी सुरक्षा। त्यो सायद सबैभन्दा ठूलो फाइदा हो तर एक मात्र होइन।
यो एक धेरै आकर्षक सजावटी र सजावटी तत्व हो। एक तत्व हो कि हाम्रो बगैचा लाई अधिक आकर्षक बनाउन सक्छ।
यो आदर्श ठाउँ हो जहाँ मा सबैभन्दा नाजुक बिरुवाहरु को रक्षा जाडो को समयमा वसन्त मा उनीहरु को बाहिर को आनन्द जारी राख्न को लागी।
यो धेरै उपयोगी छ जब वर्ष को चिसो समय को समयमा हाम्रो तरकारीहरु लाई उब्जाउ। यसले हामीलाई उत्पादकत्व बढाउन र अनुमति दिन्छ कटिंग र बिरुवा को सफलता को ग्यारेन्टी।
यसले हामीलाई एउटा ठाउँ प्रदान गर्दछ तातो मौसम बाट प्रजातिहरु बृद्धि र उष्णकटिबंधीय
यो पनि एक बन्न सक्छ बाहिर हुन को लागी उत्तम ठाउँ वर्ष को चिसो समयमा राम्रो तापमान मा घर बाट। तपाइँलाई मात्र एउटा सानो साइड टेबल र एउटा कुर्सी राख्न को लागी आवश्यक पर्दछ।
हरितगृह को कार्य हो एक नियन्त्रित वातावरण (एक microclimate) सिर्जना कि यो गर्मी, आर्द्रता र प्रकाश को इष्टतम स्थिति कायम राख्छ ताकि बिरुवाहरु र फूलहरु स्वस्थ र खराब मौसम बाट सुरक्षित बढ्छ। जे होस्, बजार मा सबै ग्रीनहाउसहरु एकै तरीकाले यो प्रकार्य पूरा गर्दैनन्, त्यसैले यो एक आफैंमा शुरू गर्नु अघि आफैलाई केहि प्रश्न सोध्न महत्त्वपूर्ण छ।
तपाइँ के को लागी ग्रीनहाउस को उपयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? यो पहिलो प्रश्न हो कि तपाइँ आफैंलाई सोध्नु पर्छ यदि तपाइँ बगैंचामा ग्रीनहाउस राख्ने निर्णय गर्नुभयो। सबै ग्रीनहाउसहरु एक आरामदायक क्षेत्र को रूप मा प्रयोग गर्न को लागी एक सुखद वातावरण प्रदान गर्दैनन्। सबै एउटै सामाग्री संग बनेको छैन, जो दुबै यसको गुणस्तर र पक्कै, एक को अधिग्रहण को लागी आवश्यक बजेट लाई प्रभावित गर्दछ।
त्यहाँ हरितगृह को अनगिन्ती प्रकार छन्, सामग्री, आकार, डिजाइन मा निर्भर गर्दछ ... आज हाम्रो उद्देश्य तपाइँ उनीहरु मध्ये केहि, सबैभन्दा लोकप्रिय को सानो ब्रशस्ट्रोक देखाउन को लागी हो, ताकि कम से कम तपाइँ स्पष्ट हुनुहुन्छ जहाँ हेर्न शुरू गर्न को लागी।
गिलास ग्रीनहाउस एक धेरै सावधान सौंदर्य र रमाईलो सबै भन्दा राम्रो इन्सुलेशन प्रदान गर्नुहोस्। तिनीहरू पनि सबैभन्दा महंगा छन्। गिलास बिरुवाहरु को बृद्धि को लागी आवश्यक उज्यालोपन प्रदान गर्दछ र भित्र बाट बाहिर र यसको विपरित एक बिल्कुल सफा दृश्य।
तिनीहरू सबैभन्दा माग्ने मालीहरु को लागी सबैभन्दा राम्रो छनौट हो, तर पनि बाहिरी आराम ठाउँहरु बनाउन को लागी सबैभन्दा उपयुक्त। जब यो बगैंचा मा घर को एक कभर विस्तार बनाउन को लागी आउँछ, उनीहरु सबैभन्दा माग मा छन्। धेरै टिकाऊ उनीहरु प्लास्टिक सामग्री बाट बनेको भन्दा धेरै धेरै टिकाऊ विकल्प हुन्।
त्यहाँ प्लास्टिक को आवरण संग ग्रीनहाउसहरु को बीच डिजाइन को एक महान विविधता छ। प्लेट सामाग्री जस्तै polycarbonate वा polymethacrylate, तिनीहरूले एक ठोसता संग फिल्म वा फिल्म सामग्री जस्तै polyethylene (PE) वा polyvinyl क्लोराइड (PVC) संग प्राप्त गर्न सकिदैन संग ग्रीनहाउस प्रदान गर्दछ।
उनीहरु गिलासको जस्तो आकर्षक छैनन् यद्यपि, प्लेटहरु संग बनेका ती यती टाढा छैनन् र सस्ता छन्। यसको अतिरिक्त, उनीहरु सामग्री हुन् जसको साथ यो काम गर्न को लागी सजिलो छ, त्यसैले एक सानो हस्तनिर्मित आफैले तपाइँ तपाइँको आफ्नै ग्रीनहाउस बनाउन सक्नुहुन्छ काठ र पॉली कार्बोनेट प्लेट को उपयोग। वेब मा, तपाइँ यो पनि गर्न को लागी जान्न को लागी ट्यूटोरियल को योजनाहरु बाट सबै कुरा पाउनुहुनेछ।
आकार मा सानो
दुबै एक सामग्री मा र अरु मा यो सम्भव छ, यसको अतिरिक्त, सानो ग्रीनहाउस चित्रहरु मा चित्रित जस्तै। यदि तपाइँ मात्र एक ठाउँ चाहनुहुन्छ जाडो को समयमा तपाइँको बिरुवाहरु को रक्षा गर्न को लागी, एक सानो seedbed बनाउन वा केहि तरकारीहरु लाई उब्जाउन को लागी, यो आदर्श समाधान हो। व्यक्तिगत रूपमा, मँ मुखौटा संग जोडिएको विकल्प मनपर्छ, के तपाइँ?
एउटा खोजी गर्नुहोस् ग्रीनहाउस को लागी राम्रो स्थान, रूखहरु वा भवनहरु को ठूलो छाया बिना कि यो एक दिन मा कम से कम hours घण्टा सूर्य प्राप्त गर्दछ, ठाउँ राम्रो तरिकाले मापन र घर मा एक हरितगृह स्थापना- तपाइँ यो बाट धेरै पाउनुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » घरमा ग्रीनहाउस स्थापना गर्नुहोस् र जाडो को सबैभन्दा बनाउन